Sablinskie emihumeni nezimpophoma - kanjani ukufinyelela
Ensimini ka-Leningrad Region kuyinto lesikhumbuzo emangalisayo bemvelo - Sablinskie emhumeni. Sablino emzaneni (manje Ulyanovka) ungaphakathi Tosno wesifunda, amane ukusuka Petersburg. Lapha, endaweni amahektheli amabili namashumi amabili kodwa lezi zindaba emfuleni zigodi futhi Tosna Sablinka, amadwala Ordovician namadwala eCambria, izimpophoma ezimbili, lasendulo yokungcwaba izindunduma.
Kugcine Sablinskie emihumeni babe ezimayini. Ngisho nangekhulu nesishiyagalolunye khona sasithathwa asebenza ngebhethri isihlabathi. Sasisetshenziselwa ukupheka crystal Imperial. Kule minyaka edlule, kusukela phansi sifika omningi rocks, futhi ngenxa yalokhu kwaba khona uxhaxha eziyinkimbinkimbi ngomshoshaphansi. Khona-ke ukuqedela emhumeni waqhubeka nemvelo - uvele komhlaba emachibini noma emifuleni, elilengayo ophahleni yavela. Ngo-1976, endaweni neyaziwayo njengesikhumbuzo semvelo.
Sablinskie ebhalwini kanjani ukuze uthole
Uma ufuna ukubona kule ndawo eyingqayizivele, ungakwazi ukuza lapha ngemoto. Shiya emgwaqeni omkhulu eMoscow futhi ukushayela kuyo ukuze "Ulyanovka" pointer, bese ulandela izimpawu "Sablinsky lesikhumbuzo zemvelo".
Kukhona enye indlela esingathola ukuvakashela Sablinskie emhumeni. Kanjani lapho esitimeleni? Ngezinye YaseMoscow sesitimela , uthatha isitimela ku-"Sablino" esiteshini. Kusuka lapha iya ku minibuses futhi amabhasi Sablinskaya emihumeni.
Ekhethekile futhi eyingqayizivele
Okokuqala nje kumele ishiwo sezwe elingavamile ndawo. Lapha, kwi sezwe flat, kanye nezimpophoma ezimbili nasemigedeni kwakhiwa zigodi ezimbili Sablinka Tosna nemifula. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka kuphela kwezifunda zezintaba.
Ososayensi nabacwaningi abaningi baye bhalisiwe lapha nane emihumeni - nanye umhosha Tosna futhi ezintathu Sablinka Valley. Kulo mBhalo, kukhona amavesi komhlaba ubude esuka ngamamitha ayishumi nanhlanu. Ziyakwazi okuvimba ewumngcingo kakhulu futhi ngokwengxenye. Zibizwa ngokuthi ama-Burrows impungushe.
On the lomfula Tosno, eduze Comtal ibhuloho, kukhona emihumeni ezimbili. Levoberezhnaya uxhaxha has a obuphelele mkhulu kunezinhliziyo ezinhlanu kanye km nengxenye futhi Pearl - amakhilomitha angaphezu kuka emithathu nengxenye. Nasemihumeni kukhona ezintathu komhlaba echibini amamitha amathathu ukujula. Izindonga embozwe obomvu sandstone emihumeni nemengamo - limestone glauconite.
Ezithakazelisa kakhulu, hhayi kuphela izivakashi kodwa futhi ngoba ososayensi nabacwaningi kuyinto emhumeni, kuze kube muva nje kwegama kunalokho alithandeki - kudoti. Ngakho lalibizwa ngenxa landfill banal ahlelwe ngenhla futhi ukuhamba ngayo. Njengoba isikhathi sasiqhubeka, bonke lowo doti isuswe, emhumeni vaults kwaqinisa - kanti imayini wangaphambili, futhi manje emhumeni waziwa ngokuthi Kwesokunxele-ebhange.
ubude bayo - amamitha angu-300. Namuhla, ephelezelwa inkombandlela abanolwazi uqhutshwa uhambo emhumeni, ngabondla ikakhulu Left Bank. Lapha uzobona amakamelo ezinkulu futhi ezinhle anamagama yasekuqaleni: Dome noma Star, Red Riding Hood, Hall uyinkosi Underworld, isikhala esikhulu, amakoloni futhi weJubili.
Ungabona imali ye Ordovician nezilwandle eCambria. Uyothola nakanjani khombisa imbobo Cat sika. Climb kuso kungenziwa kuphela amanga, kuyilapho izandla kufanele igcinwe kanye umzimba.
Amazinga air emhumeni esiyindilinga plus degrees eziyisishiyagalombili. It wahlala umhlambi amalulwane. Uma uvakashela emhumeni ebusika, ungabona belele. On the amatshe amhlophe ebusika izimvemvane elele.
Tour womhume egobhoza imizila eziningana. Ethandwa kakhulu wabo - Uma egibele ibhasi eya izimpophoma ezimbili, emihosheni bese evakashela Tosna kwesokunxele yasebhange babehlezi emuva emhumeni. Umzila kuthatha amahora amabili nesigamu, lapho imizuzu izivakashi amane nanhlanu ukuchitha emhumeni. izinhlelo Trip ziphathelene ezahlukene futhi akuzona kuphela izivakashi omdala, kodwa futhi zesikole. Bayoba usizo ekutadisheni umlando wemvelo nokuma kwezwe.
Izinkulungwane zezivakashi ngokuvakashela Sablinskie emhumeni Izibuyekezo rave ushiye. Uhambo ulwazi, vumela ukuba uzizwe caver.
Kwaphela iminyaka eminingi, izakhamizi Sablino ukutshela legend we cavers White. Njengoba Bathi, kanye kwafa emhumeni wamazwe, nomoya wakhe sase sihlala kule ndawo, ukuze phakade ukuvikela ubuhle bomhlaba ngomshoshaphansi. Ngokwe-legend, wayenomusa kakhulu izivakashi nelawulekayo ebhalwini, uma ihlukana off elilengayo, baphonse udoti yokuvuka amalulwane, njll, kungaba kanzima mthetho - .. Ngoba wokugoqa, ukuze singene Maze avaliwe.
Sablinskie emihumeni ubambe enye imfihlo. Kukhona legend ukuthi ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili, le migede ecashele amaphoyisa uVladimir Lenin. Hambo uphelezelwe nguNgqongqoshe indoda eyayazi amavesi imfihlo, futhi wasiza uVladimir Ilyich uthole ngokusebenzisa ophumayo kude. Lokhu kuthutha wazama ukuthola cavers eziningi, kodwa kwaba nhlanga zimuka nomoya.
Kusukela ngo-1982 kuya ku-1984 Sablinskie emhumeni "yokukhosela" e Maze yayo abantu kunamasonto angaba amakhulu amathathu, abanobunye amaqembu kanye amaqembu. Ezinye zazo yilezi kuncike esiqinile wokuqeqeshelwa impi, abanye ngedwa, hhayi ukunamathela yimaphi amaqembu. Babecabanga ukuthi abode inkululeko. Inala kudlalwa ngokwanele, amalungu lesi senzo ongaziwa ahlakazekile ukuba bangamukele emizini yabo.
Esikhathini esizayo esiseduze Sablinskie emhumeni iyoba yindawo lapho lwesayensi esiyingqayizivele oyokwenziwa. Omunye zemibukiso komhlaba uzobe isehlane ngokuphelele nezwe. Ososayensi bafuna ukubona Yiqiniso yemvelo kwezinqubo ezingokwemvelo ezenzeka ngomshoshaphansi. Abaningi uzokubuza: "Kungani ukuhlola izobanjelwa kuyinto womhume?"
Zonke daba microclimate okhethekile. Njengoba wazi, unyaka wonke izinga lokushisa uzinzile - eziyisishiyagalombili degrees Celsius. Ngo emihumeni izimo asemkhathini yokuthi isihlahla, setha lapha ukuze esidlule Unyaka omusha, abephule cishe nambili izinyanga.
Sablinskie emihumeni, izimpophoma ukuheha inqwaba izivakashi emzaneni. Futhi bakithi hhayi kuphela, kodwa futhi izivakashi zakwamanye amazwe. Kwakheka kwi flat sezwe nezimpophoma - kungcono an amazing ihlaya nemvelo. Nokho, ukuphakama yabo akuyona omkhulu, kodwa akubalulekile kangako.
UMfula iNeva Tosna amadala. Umsolwa uvele iminyaka eyisikhombisa noma nesishiyagalombili edlule. isiteshi salo ubudala usukela ngaphansi emanzini eGulf of Finland. Ngo-1884, ukwakhiwa amathathu-ikhilomitha isiteshi (yaqedwa ngo nesishiyagalolunye ngonyaka wesishiyagalolunye) yaqalwa. Yena prolih kusukela Kronstadt kuya somfula iNeva. Isiteshi yakhelwe adlule izitsha zakhe lezindiza ngokujulile phansi. It likhona futhi isetshenziswa ngokuphumelelayo namuhla.
Tosnensky Falls iyona yasakazwa eYurophu. ububanzi ifinyelela amamitha amathathu, futhi ukuphakama kuyahlukahluka eminyakeni sihluke amabili kuya ngamamitha amathathu nesigamu. Esikhathini canyon Tosna phakathi masimu, esisogwini emazingeni ehlukene, ukusakaza eziningi ezincane egeleza, eligeleza ku-limestone Slabs.
Sablinsky waterfall kancane ephansi. ukuphakama kwalo ingeqi amamitha amabili nesigamu. Kusukela canyon uzothola umbono omangalisayo zamanzi wasuphaphatheka. Njengomthetho, Ukuvakashela le ndawo uvala iyiphi hambo.
Sablinskie emihumeni nezimpophoma - eliyingqayizivele eziyinkimbinkimbi yemvelo, okuyinto kufanele ubone noma ubani nje oza Petersburg.
Trip womhume kusikisela nemishini ekhethekile (nezigqoko, izibani, nokunye. D.). Umkhuzi wabo oluvelele nezivakashi ngokwabo kufanele sinakekele izicathulo avaliwe futhi waterproof ne ematheni ezinzile ezokwenza azisheleli emadwaleni. Nezingubo kufanele kube ukukhanya, kodwa efudumele.
Kumelwe ulalelisise ukuthi umfundisi phambi hambo, futhi bagcine neziqondiso zokuphepha azolibhubhisa ukumemezela kuwe.
Nasemihumeni uhlala eziningi amalulwane. Lokhu izilwane evikelwe. Uma uhambo ebusika, khumbula ukuthi ngeke dazzle flashlight ukukhanya, ukukuthinta, ukuvusa.
Hhayi kuwufanele ingozi bese ngihlaliswa phansi izingane ezingaphansi kweminyaka emihlanu, abadala, futhi bonke labo abaphethwe umfutho wegazi ophakeme, claustrophobia, isifo senhliziyo nemithambo yegazi.
Khumbula ukuthi ukuxhumana mobile emihumeni lingekho ngokuphelele. Ngakho-ke, musa siphambuke iqembu lakho - nasemihumeni lula impela ulahleke. Kukhona amacala lapho abantu wazulazula Maze izinsuku ezimbalwa kwaze kwaba yilapho bethola abatakuli.
Namuhla, wazi ukuthi iyini - Sablinskie emhumeni. Kanjani ukuze uthole kubo, siyatshelwa, ngakho musa ukuchitha isikhathi, uze ubone le semvelo esiyingqayizivele. Lolu hambo wena nakanjani ngeke udumazeke futhi uzoba ujabulile ithuba zibabaza ubuhle emhlabeni komhlaba. Sablinskie emihumeni nezimpophoma ngeke abashiye ubani nandaba.
Indlela ukufinyelela "Sheremetyevo" enqamulelayo?
IPharadesi Bali: Izibuyekezo
Malaya Ordinka - indawo wazizwa ukuphefumula isikhungo somlando eMoscow
Monte Carlo - emzini amaphupho akho
Balchik (Bulgaria) - one of the best spa resort kuleli zwe
Futhi lokho oyaziyo Vladivostok? Yini ndawo lokho?
Iziphakamiso Ukuxhumana embhalweni: izibonelo. iziphakamiso Ukuxhumana embhalweni, izindlela zokuxhumana
Ezemidlalo Ukubheja noma kanjani ukuze uthole lezemidlalo
Zokupheka okumnandi: isaladi nge yenkomo
Kanjani ukuthuthukisa isayithi ngokwakho kusuka ekuqaleni
Three-tiered embhedeni withdrawable - ifenisha ukhululekile izingane nabazali bazo
Boxer Roman Karmazin: Biography, kwezemidlalo
Amacansi zokufundisa izingane - indlela eya ulwazi oluthuthukayo lomhlaba
Ama-headphone we-Bluetooth - accessory yesimanje for zobuchwepheshe
Imininingwane Sberbank ekudluliseni ekhadini. imininingwane Savings Bank ekudluliseni ekhadini
Ngingaba ukudala logo ngokwakho?